‘सुकुटे विच’मा लागूऔषध कारोबार ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
‘सुकुटे विच’मा लागूऔषध कारोबार !
प्रकाशित मिति २९ श्रावण २०७६, बुधबार ११:४१ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । ‘सुकुटे विच’को नामले चर्चित सिन्धुपाल्चोको रिसोर्र्टमा लागूऔषधे कारोबार हुने गरेको खुलेको छ । शुक्रबार र शनिवार भिडभाड रहने उक्त रिसोर्टमा सञ्चालककै मिलोमतोमा लागूऔषधको कारोबार हुने गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका बिभिन्न जिल्लाबाट मनोरन्जनका साथै बिदाको सदुपयोग गर्न आन्तरिक र केही बाह्य पर्यटक सुकुटे पुग्छन् ।
त्यहि भिड मध्यबाट केही लागूऔषधमा फसेका दुव्र्यसनीलाई रिसोर्टका कर्मचारीले नै लागूऔषध उपलब्ध गराउँदै आएको स्रोत बताउँछ । बिषेशगरी उक्त रिसोर्टमा लोकल गाँजा र चरेशको कारोबार हुने गर्छ । यो बिषयमा उक्त रिसोर्टका केही कर्मचारीलाई ग्राहकले जानकारी गराउँदा समेत सामान्य रुपमा लिएका थिए । रिसोर्ट सञ्चालक र कर्मचारीकै मिलोमतोमा उक्त रिसोर्टमा गाँजाको कारोबार हुने गरेपछि ग्राहकको आग्रह पनि नजरअन्दाज गरिएको छ ।
ठमेलमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर दुई दशक अगाडिदेखि सुकुटे रिसोर्ट चल्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त रिसोर्टले कहिले काँही विदेशीलाई मात्र प्रवेश गराएर ‘ट्रान्स पार्टी’ समेत गर्छ । । ‘ट्रान्स पार्टी’ विश्वमै अबैध मानिन्छ । तर प्रहरी प्रशासनको आँखामा छारो हालेर पैसाको लागि सुकुटे संचालकले अबैध लागूऔषधको कारोबार सोही पार्टीमा गर्दै आएका छन् ।
लागूऔषधको धन्दाका साथै यो समूहले दैनिक लाखौ रुपैंयाँको कारोबार गरे पनि भ्याट बिल भने कुनै ग्राहकलाई पनि दिँदैन । प्रतिव्यक्ति २५ सय रुपैंया लिएर एक रात बस्न तथा सामान्य खानाको व्यवस्था सुकुटेले गरेको छ । शुक्रबार तीन सय र शनिबार दुई सयको हाराहारीमा उक्त रिसोर्टमा ग्राहकको भिड लाग्ने गर्छ । तर कुनै एक जनालाई पनि बिल भने रिसोर्टले दिँदैन । जसबाट दैनिक ३० देखि एक लाखसम्म राजश्व समेत यो रिसोर्टले छल्दै आएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डसमेत यो रिसोर्टमा स–परिवार आरम गर्न पुग्छन् । प्रचण्डमात्र होईन नाम चलेका जिल्लाका नेता देखि बिभिन्न दलका प्रभावशाली नेता समेत यो रिशोर्टमा पुग्ने हुनाले ति रिसोर्ट सञ्चालकले त्यसको फाईदा उठाउँदै रिसोर्टमा लागूऔषधको कारोबार देखि राजश्वछली समेत गर्दै आएको छ । सञ्चालकले प्रचण्ड बसेकै दबाबका आधारमा लागूऔषधको व्यापार गरेको बताइन्छ ।
उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई ‘जन्मकैद’,कानुन नसच्याए सेवा छाडेर घरमा बस्छौँः चिकित्सक
काठमाडाैं । डाक्टरले उपचारमा लापरबाही गरी बिरामीको मृत्यु भएमा ‘जन्मकैद’ को सजाय हुने भएको छ । यसअघि लापरबाही तरिकाले स्वास्थ्य…
सरकारी सम्पत्तिमा ब्यापारीको लुट: साल्ट टेडिङको करोडौं भ्रष्टाचारमा अख्तियार मौन, छानबिन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयबाटै गायब !
काठमाडौं । देशबाट राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र आएको १० बर्ष बितिसकेको छ…
काठमाडौं । सन्तान प्राप्तिका लागि मानिसहरु के के गर्दैनन् । यस्तै भारतको हिमाचल प्रदेशको एउटा गाउँमा पनि हुने गर्दछ ।
काठमाडौं । संघीय सरकारको स्थायी प्रशासन कमान्ड गर्ने मुख्य कानुन नै संघीयता विरोध हुने देखिएपछि सरकारले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान…
यसरी गर्नुस महिला हुन्छन् पानी पानी
जापान । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेबीच आज बिहान टोक्योस्थित आकासाका प्यालेस, स्टेट गेष्ट हाउसमा भेटवार्ता…